Ahoana ny fametrahana KDE amin'ny Fedora | Avy amin'ny Linux
MRGERSON | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux
Tsy haiko raha nitranga tamin'ny maro fa manana rafitra X na Y miaraka amin'ny tontolon'ny birao izy ireo (raha ny ahy Gnome) ary te hanandrana hafa izy ireo fa tsy te handrafitra ny rafitra iray manontolo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia tiako haseho anao ny fomba fitsapana KDE amin'ny rafitra miaraka amin'i Fedora / Gnome. Raha fintinina rehefa manomboka ny fizarana ianao dia afaka misafidy izay tontolo hanombohana. OK manomboka isika.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ampio ireo repositories mena-mena izay hataonay izao
Avy eo dia mila mampandeha azy ireo ianao (Izy ireo manokana no navitrika fa manamarina fa nampavitrika azy ireo)
Karohy ny teny Tadiavo ary ovao ho 1 ny sandany (Alefaso = 1).
Izao dia mila mametraka KDE fotsiny ianao
Atsaharo ny PC ary rehefa eo amin'ny toeran'ny fizarana manomboka eo ambanin'ny sehatry ny teny miafina ianao dia milaza ny fizarana, tsindrio ary tsindrio izay tianay hiditra GNOME, KDE PLASMA 😉
Sary nalaina avy tamin'ny http://www.clopezsandez.com/2012/06/instalando-kde-sobre-gnome.html
Izay ihany no antenaiko fa nanompo anao 😀 Pikantsary sasany
Manoro hevitra anao aho mba tsy hamongoranao ny KDE satria efa novakiako fa afaka manary ny rafitry ny zavatra hafa ianao 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ahoana ny fametrahana KDE amin'ny Fedora
Miasa mitovy amin'ny FUDUNTU 2013.1 ve izy io?
EDIT: Tsy vita amin'ny FUDUNTU; mipoitra ity:
http://mirror.unl.edu/kde-redhat/fedora/2013/i386/testing/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: http://mirror.unl.edu/kde-redhat/fedora/2013/i386/testing/repodata/repomd.xml
Manandrana fitaratra hafa.
Tsy misy atao
Tsy manohana an'i Fedora intsony i Fuduntu, efa forked taloha.
WTF? Ary ankehitriny inona no ifotoran'izany?
@elav, fizarana mahaleo tena izao.
Ary ny rehetra hitandrina gnome 2
que? Ny fampiasana ny redhat-kde repo dia tsy ampiasako ary tsy hanome sosokevitra azy aho, raha efa tonga amin'ny an'i Fedora ny kde, manao groupe kde-desktop mihoatra ny ampy fotsiny.
Eny, toa tsara amiko ilay fomba raha hitsapana ny KDE ary hanohy hiasa miaraka amin'ireo rindranasa Gnome na Gnome. Fa raha te hampiasa KDE ianao, izany hoe, Fedora miaraka amin'ny KDE na fizarana hafa miaraka amin'ny KDE izay manana Gnome amin'ny toerana misy anao, dia tsy io no safidy tsara indrindra. Raha ny momba ahy dia nampiasa KDE nandritra ny taona maro tao amin'ny Fedora aho ary ny safidy tsara indrindra, madio ary tsy misy hadisoana dia ny fampiasana ny Fedora KDE Spin, hanana traikefa kde tanteraka ianao. Raha mampiasa ny DVD misy gnome amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ianao ary mametraka KDE any aoriana, dia tsy hitovy izany, lazaiko aminao avy amin'ny traikefa an-taonany maro.
Manoro hevitra ny hampiasana ny DVD misy gnome fotsiny aho ao amin'ny Centos sy Scientific Linux, fa mitandrema ihany !!! aza mametraka gnome. Mandritra ny fizotry ny fametrahana fonosana rindrambaiko dia ilaina ny manafoana ny safidin'ny Desktop rehetra izay navadika ho default (mazava ho azy fa avy amin'ny gnome) izy ireo ary misafidy ny Desktop KDE. Izaho manokana dia miditra amina vondrona fonosana sasany ary manafoana programa gnome 3 na 4 (fivoarana, packagekit, plugin totem sasany, sns.) Hananako amin'ny farany KDE tanteraka. Ary miasa toy ny hatsarana izy io. Izaho aza mankaleo tsy manana olana.
Famaranana: raha tianao ny KDE, aza apetraka ny Gnome ary avy eo ny KDE, raha mamela izany ny fizarana.
Marina izany, na dia takatro aza fa amin'ny DVD Fedora 18, ny fisafidianana ny KDE dia mampiditra izany tontolo izany ho azy fa tsy mila mifidy sy tsy mifidy ireo fampiharana. Tsy notsapako izany ka raha nisy nanao dia tsara ho fantatra izany.
Tena marina, amin'ny DVD dia afaka misafidy ny KDE ianao nefa tsy mila mametraka azy aorian'ny nametrahana azy tamin'ny Gnome tany am-boalohany. Saingy ny KDE izay ho azonao dia tsy hitovy amin'ilay azonao amin'ny Spin, izay atoroko azy. Tsy mbola nanandrana ny andiany faha-18 aho, tsy afaka milaza aminao ny fomba izy fa miloka fa mbola toy izany ihany. Ohatra, heveriko fa tadidiko fa ny fonosan'ny birao dia feno kokoa amin'ny dvd noho ny fihodinam-bokatra izay nentin'i koffice, ary koa ny programa manokana an'ny KDE izay tsy apetrakao amin'ny DVD. Izany no antony nilazako fa raha mitady tontolo feno kokoa ianao dia tokony hataon'ny KDE amin'ny fihodinana, ary avy eo apetraho ilay programa ilainao, satria kely kokoa amin'ny rindrambaiko ny fihodinana.
Ny zavatra momba ny fisafidianana sy ny famafana dia satria ao amin'ny Scientific Linux, ohatra, tsy misy safidy KDE misaraka, ny rindrambaiko rehetra dia voafidy mandritra ny fametrahana. Satria mifantoka amin'ny Gnome amin'ny toerana misy anao izy, na dia misafidy ny Desktop KDE ianao dia hametraka fampiharana tena ilaina amin'ny rafitra gnome. Ny ataoko dia ny manamarina azy ireo ary manafoana azy ireo. Imbetsaka aho no nanao azy ary segondra dia voavaha izany, fa na iza na iza tsy mahalala dia handinika azy ireo mandritra ny fotoana kelikely fa tsy dia manelingelina loatra ny miteny. Ny hany gnome fampiharana tsy maintsy avelanao, satria raha tsy izany dia tsy hanana Internet ianao, dia ny NetworkManager, tsy misy mitovy aminy ao amin'ny KDE ary raha tsy apetrakao io dia vita. Ho an'ny ambiny, esoriko ao amin'ny faritra Desktop, izay rehetra an'ny gnome, ary ampidiriko ihany koa ny IceWM, izay ilaiko amin'ny solosaina taloha. Mila milaza aho fa mamela an'i Grsync, firefox ary thunderbird koa aho satria tsy manana fiankinan-doha mihoampampana. Etsy ankilany, programa iray tiako be dia ny Disk Utility fa tsy apetrako satria mila nautilus ary raha manana feso aho dia apetrako ihany koa.
Toy izany koa, araka ny nolazainao, indrindra amin'ny Fedora, dia nanoro hevitra foana aho ny hametraka Spin, izay tafiditra tsara ao amin'ny KDE ao amin'ny Fedora.
Ny fametrahana ny tontolo roa dia tsy mamokatra, hiteraka fonosana mahamenatra xd ianao
Ary ny tena tsy mahazo aina, amin'ny tontolo iainana roa dia miseho ny rindranasa rehetra, salady tsy mety mamy….
Ary tsy mora ve ny mametraka KDE mivantana amin'ny DVD?
Azo antoka, fa te hanandrana foana ny olona, ​​ary tsy misy programa mitovy dika mitovy amin'ny terminal, fa hanana ny terminal gnome ianao, ny terminal xfce (?) Ary kde konsole, na nautilus, dolphin ary konkeror raha hijery file ... of tia, tsy misy tsy tia
Fernando Rojas dia hoy izy:
Nanandrana ny KDE aho, zavatra mahatsiravina tokoa izany. Elaela ny fametrahana azy na dia tadidiko 4 gigabyte aza aho. Fa misaotra. Ka fantatro fa tsy ho ahy ny KDE. Mijanona ao amin'i Gnome aho 😀
Valiny tamin'i Fernando Rojas
Salama, nametraka KDE tamin'ny grouplist aho, saingy tsy afaka manomboka azy. Izaho dia manana ny fonosana fangatahana napetraka, saingy mbola mila manomboka aho ary nanandrana nivoaka aho saingy tsy nipoitra ilay safidy hisafidianana ny tontolon'ny birao ... Misy olona afaka manampy ahy ve? Misaotra betsaka!
ny dingana «» »» sudo nano /etc/yum.repos.d/kde.repo »» »»
Tsy vitako izany satria tsy mampiseho na inona na inona ahy ilay rakitra kde.repo, foana ny fisie.